NLD ပါတီအနေဖြင့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ သင်ခန်းစာရသွားတာပေါ့ဟု မန်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဆို | Mizzima Myanmar News and Insight
NLD ပါတီအနေဖြင့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ သင်ခန်းစာရသွားတာပေါ့ဟု မန်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဆို
မန္တလေး၊ နိုဝင်ဘာ ၅ ။ ။ နိဝင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ကျင်းပသည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ၌ အာဏာရ NLD ပါတီအနေဖြင့် လစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ် ၁၃ နေရာတွင် ၇ နေရာ အနိုင်ရပြီး ၆ နေရာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့မှုအပေါ် သင်ခန်းစာရကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်က ပြောကြားလိုက်သည်။
" ကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့ ဒီကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ သင်ခန်းစာရသွားတာပေါ့ ။ လာမယ့် ၂၀၂၀ မဲကြီးအတွက် ပြင်ဆင်ချိန်ရသွားတာပေါ့။ဒီကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒီချုပ်ဟာ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ မဲဆန္ဒနယ် အချို့မှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ လစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ်မှာ ၇ နေရာ သာနိုင်ပြီး ၆ နေရာ ရှုံးခဲ့ပါတယ်" ဟု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (ဗဟို )၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ (၂) မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်က ပြောကြားသည်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် NLD အနိုင်ရခဲ့သောနေရာများမှာ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးနေရာ၊ သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာ၊ မြင်းခြံမြို့နယ် ပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် နေရာတို့ဖြစ်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအရ လစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ် ၁၃ နေရာတွင် NLD ပါတီမှ ၆ နေရာ ရှုံးခဲ့ပြီး ၇ နေရာ အနိုင်ရခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာအတွက် ဦးစိုင်းပန်းဆိုင် (ခ) ဦးစိုင်းထွန်စိန် ၊ ဦးကျော်စိန် (NLD ) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီမှရှိသည့်ဆန္ဒမဲပေါင်း ( ၇၁၆၇ ) ဦး ၄၀.၇၁ ရာခိုင်နှုန်း l ဒေါ်နန်းထွေးမှုံ ရှမ်းတိုင်းရင်းသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ( ၄၆၅၂ )ဦး ၂၆.၄၂ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဦးစိုင်းအောင်ကြည် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ မှ ဆန္ဒမဲပေါင်း( ၄၁၀၃ ) မဲ ၂၃.၃၀ ရာခိုင်နှုန်း l ဒေါက်တာစိုင်းကျော်အုံး ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဆန္ဒမဲပေါင်း ( ၉၅၄ ) မဲ ၅.၄၂ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ဦးအောင်ဌေး တစ်သီးပုဂ္ဂလ ဆန္ဒမဲပေါင်း (၇၃၀ ) မဲ ၄.၁၅ ရာခိုင်နှုန်း စသည်များ ရရှိခဲ့ပြီး ရှမ်းတိုင်းရင်းသား လူမျိုးမဲဆန္ဒနယ်မြေတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ငါးဦးအတွက် မဲရုံ ၃၆၄ ရုံ နှင့် မဲ ဆန္ဒရှင်စာရင်းမှာ( ၄၂၄၆၃ )မဲ ရှိပြီး လာရောက်မဲပေးသူ( ၁၇၉၆၄ )ရှိသည့်အတွက်ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၉ ( ခ ) နှင့် အညီရှမ်းတိုင်းရင်းသား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အတွက် (NLD ) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ မှ ဦးစိုင်းပန်းဆိုင် ( ခ ) ဦးစိုင်းထွန်စိန် ( ခ ) ဦးကျော်စိန် အား ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်အတည်ပြုထားကြောင်းသိရသည်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၌ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် မြင်းခြံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် နေရာအတွက် ဦးစိန်မြင့် (NLD) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ မှရှိသည့် ဆန္ဒမဲပေါင်း ( ၆၇၆၅၉ ) မဲ ၇၅ . ၈၂ ရာခိုင်နှုန်းlဒေါက်တာသန်းဝင်း ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ဆန္ဒမဲပေါင်း( ၁၇၀၂၅ ) မဲ ၁၉ .၀၈ ရာခိုင်နှုန်း l ဦးဖြိုးဟန် လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီမှ ဆန္ဒမဲပေါင်း ( ၃၄၂၅ ) မဲ ၃.၈၄ ရာခိုင်နှုန်း နှင့် ဦးရဲကျော်အောင် ပြည်သူ့အလုပ်သမားပါတီမှ ဆန္ဒမဲပေါင်း (၁၁၂၉ ) မဲ ၁.၂၆ ရာခိုင်နှုန်း ရရှိခဲ့ပြီး ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာအတွက် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းလေးဦးအတွက် မဲရုံ ၂၆၈ ရုံ၊ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းမှာ ( ၂၂၁၈၆၅၉ )ရှိပြီးလာရောက်မဲပေးသူ ( ၉၁၁၃၀ ) ဦး လာရောက်မဲပေးသည့် အတွက် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၉ ( ခ ) နှင့် အညီ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် အတွက် (NLD ) အမျိုးသာ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ မှ ဦးစိန်မြင့်အားမြင်းခြံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်အတည်ပြုထားကြောင်းသိရသည်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး သပိတ်ကျင်းမြို ့နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာအတွက် ဦး စိုးလွင် (NLD ) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီမှရှိသည့် ဆန္ဒမဲပေါင်း ( ၁၂၅၀၂ ) မဲ ၆၀ .၈၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဦးမြင့် စိုး ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ဆန္ဒမဲပေါင်း ( ၅၂၂၀ ) မဲ ၂၅.၄၁ ရာခိုင်နှုန်း ၊ ဦးညီညီ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး ညီညွတ်ရေးပါတီမှ ဆန္ဒမဲပေါင်း ( ၁၉၇၁ ) မဲ့ ၉ .၅၉ ရာခိုင်နှုန်း ၊ဦးအောင်ကြည်မြိုင် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှ ဆန္ဒမဲပေါင်း ( ၃၂၀ ) မဲ ၁. ၅၆ ရာခိုင်နှုန်း ၊ ဦးဇော်မင်းထွန်းရှိန် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အင်အားစု ပါတီမှဆန္ဒမဲပေါင်း ( ၃၁၄) မဲ ၁ . ၅၃ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ဦးမင်းသူ ပြည်ထောင်စုအလုပ်သမား လယ်သမားအင်အားစုပါတီ မှဆန္ဒမဲ ပေါင်း ( ၁၇၂ ) မဲ ၀ .၈၄ ရာခိုင်နှုန်း ၊ ဦးမြင့်နိုင် အမျိုးသားညီညွှတ်သော ဒီမို ကရက်တစ်ပါတီမှ ဆန္ဒမဲပေါင်း ( ၄၆ ) မဲ ၀ . ၈၂ ရာခိုင်နှုန်း ရရှိခဲ့ပြီး တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်နယ်မြေတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ခုနစ်ဦးအတွက် မဲရုံ ၄၅ ရုံ နှင့် မဲဆန္ဒရှင် စာရင်းမှာ ( ၄၉၆၂၂ ) ဦးရှိပြီး မဲလာပေးသူ (၂၁၁၈၉ ) မဲ လာရောက်မဲပေးခဲ့သည့်အတွက် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၉ ( ခ ) နှင့် အညီ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် အတွက် (NLD ) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီမှ ဦးစိုးလွင် အား သပိတ်ကျင်း မြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်အတည်ပြုထားကြောင်းသိရသည်။
၂၀၁၈ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း၌ မဲပေးခွင့်ရှိသူ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူပေါင်း သုံးသိန်းတစ်သောင်းကျော် ရှိသော်လည်း မဲလာပေးခဲ့သူ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူပေါင်း တစ်သိန်းသုံးသောင်းကျော် ရှိခဲ့ပြီး ၄၁ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သာဆန္ဒမဲပေးခဲ့ကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် မှ ထုတ်ပြန််ထားသောစာရင်းများအရသိရသည်။
NLD ပါတီမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်